Bixinta Jaaliyada Wadajirka ah ee Fanka, Cuntada, iyo Taariikhda
Golaha Degmada Bluff ee Fourton Community Council
The Golaha Degmada Community Dayton ee Dayton wuxuu u qoondeeyay inuu kobciyo ka qaybqaadashada muwaadiniinta iyo kor u qaadida hantida xaafadda. Waxaa la sameeyey 1971-kii, ujeedada ururku waa inuu noqdo ilaha qiimaha leh ee beesha si loo abaabulo loona taageero taageerada daneeyayaasha si loo hagaajiyo tayada nolosha ee xaafadda Dayton's Bluff. Waxay tan sameeyaan iyagoo martiqaadaya dhacdooyin kala duwan oo bulshada loogu talagalay.
Ka dhig Xarunta E 7th Street
Night Night Out ee Bariga 7th Street waxay noqotay dhacdo aad u muhiim ah oo xubnaha bulshada ay rajeynayaan xagaaga kasta. Maalintaan, qoysaska Dayton's Bluff waxay ku socdaan degmada ganacsiga Bariga 7aad, waxay la kulmayaan deris, iyagoo la shaqeeya milkiilayaasha ganacsiga, iyo inay ku raaxaystaan muusikada, cuntada iyo waxqabadyada. Dhacdadani waxay sharraxaysaa hantida alaabooyinka, adeegyada, iyo khayraadka xaafadda Dayton ee Bluff, dhiirigelinta dadka deegaanka inay ku dukaameystaan degaannada iyo ganacsiyada si ay u taageeraan bulshada. Sidoo kale waa fursad waalidiinta inay carruurtooda u qoraan barnaamijyada isboortiga, ganacsatada maxalliga ah si ay u helaan macaamiisha cusub, iyo mutadawiciin bulsho oo da 'kasta ah waxay wada shaqeeyaan iyagoo muujinaya sida ay uga go'an tahay inay ka dhigaan Dayton's Bluff iyo midba midka kale.
Farshaxanka saaran boogaha
Dhalinyaradu waxay jilicsan yihiin derbiga hore ee Margaret Park oo qayb ka ah barnaamijka "Art on the Blocks". Ka qaybgalayaasha ka soo qaybgalay 180 Degree, Dugsiga Battle Creek Middle School, Maalinta Toddobaad ee Todobaadka Adventist Church, iyo xaafadda Dayton Bluff ayaa ka shaqeyn jirtay xilliga xagaaga ee ku yaala dhalinyarada tooska ah ee loo yaqaan 'East Side'. Barnaamijkan, dhalinyaradu waxay fikirkooda ku muujiyeen farshaxan waxayna soo bandhigeen daneeyayaal ku saabsan dayactirka Margaret Park iyo horumarinta tayada nolosha ee bulshadeena.
Munaasabada New Moon
Sanadka 2014, Golaha Golaha Bulshada Dayton ee Bluff Xarunta Ganacsiga ee East Side albaabada u furay bulshada si ay ugu raaxaystaan dabaaldega dhaqamada kala duwan ee xilliga goosashada. Xubnaha beesha ayaa ku qulqulay "Library Free Big," oo ah iskaashiga Golaha Bulshada, Magaalo-weynaha iyo St. Paul Public Library. Dhallinyaradu waxay aqriyaan buugaagta bilaashka ah si ay ula qabsadaan qoysaskooda. Ka qaybgalayaashu waxay ku raaxaysteen cuntada Filipino / Asian ka soo iibiya iibiye si ay u furto makhaayadda dhinaca Bariga Sidee, iyo ururadu waxay ku soo biireen kaqeybgalayaasha si loo dhiso xiriirka bulshada ee kor u qaadaya isdhexgalka iyo iskaashiga.